Ukuphupha nge-Oak Discover Discover Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Um-oki ngowokuzalwa phantse kuyo yonke into el mundo. EJamani lolona hlobo luxhaphakileyo lwemithi enqabileyo. Iinkuni zayo zixatyiswa njengamafutha afanelekileyo kunye nezinto zokwakha. Iziqhamo ze-Oak yimithombo etyebileyo yeecarbohydrate kunye neeprotein, ezibenze baba kukutya okufanelekileyo kwehagu kwixesha elidlulileyo kunye nomthombo obalulekileyo wokutya kubantu ngamaxesha oswele. Ixolo lom-oki elitsha lalikhona kwaye lisetyenziswa njengeyeza lendalo lokuqulatha iitannin. I-Oak ikwavelisa iziqhamo ezibizwa ngokuba ziiacorn, ezizezinto ekuthiwa zii-walnut fruit.
Njengeminye imithi, i-oki nayo ifuzisela. IiTeuton kunye namaCelt zazithatha njengomthi ongcwele, njengonxibelelwano nezithixo. AmaRoma ayingcwalisela umthi wom-okhiwu kuthixo wawo uJupiter, ngelixa amaGrike ayewunikela kuZeus. KubuKrestu, i-oki yathathelwa ingqalelo njengomthi wobomi, emva kwayo yonke loo nto, inebomi obujikeleze izizukulwana zabantu ezingama-30. Ixesha elide, iinkundla zazibanjwa phantsi kwemithi yom-oki, kwaye umthi kunye namagqabi awo luphawu oludumileyo lokomelela nokunyamezela. Umzekelo, iiphedi zamagxa kunye neenjengele zeBundeswehr zihonjiswe ngezithsaba ze-oki zamagqabi.
Nabani na ophupha ngomthi we-oki unolwazi okanye ngokungazi exakeke ngumxholo amandla. Nokuba ukuphupha ngokwako kumi ngokuqinileyo njengelitye kunye neenyawo zombini kumhlaba wezibakala okanye kulangazelela ukhuseleko lomntu ongumnini wale propati.
Iinkcukacha zephupha zibalulekile ekuchazeni iphupha: ngaba umthi uthwala amagqabi okanye iziqhamo, okanye ngaba awuzalanga, mhlawumbi ubunile? Ngaba umthi wom-oki uwedwa okanye uphupha ehlathini?
1 Uphawu lwephupha «oki» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «oki» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «oki» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «oki» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngomthi wayo onzima kakhulu kunye nokukhula okunamandla, i-oki luphawu lwamaphupha emadodeni. okwakhiwa y Amandla, ngengqondo ebanzi ikwanyamezelo kunye nokunyaniseka. Nabani na obona umthi wom-oki ephupheni ulangazelela indalo eyomeleleyo nenempilo, eyakhe okanye eyomnye umntu. Ukutolikwa kwamaphupha, i-oki luphawu lwesiseko esingagungqiyo apho ubomi bephupha buhlala buphelele okanye buziinxalenye.
Ukuba uphawu lwephupha "oki" ngumthi omkhulu onesithsaba esiluhlaza kunye namasebe amaninzi, iphupha lithembisa impilo, Ulonwabo kunye nobomi obude kunye nokuchuma. Nabani na obona lonke ihlathi lom-oki liluhlaza ngokuluhlaza ephupheni unokunyuka phu melela kunye nethemba lokuphumelela emsebenzini.
Kwelinye icala, i-oki engenanto ekuchazeni amaphupha kufuneka iqondwe njengesilumkiso malunga nokusilela kwezicwangciso zakho kunye nobunzima obuzayo. Umthi oki oqhekekileyo nobunileyo unika isilumkiso imfuneko enkulu Nangona kunjalo, lowo uphuphayo unokujamelana nesibindi sakhe.
Ukubona komthi we-oki ogawulweyo ephupheni kubonisa ukwahlukana nomntu osondeleyo, mhlawumbi ngenxa yokugula okanye ukufa. Ukuba i-oki igcwele iziqhamo, uphawu lwephupha luphawu lokukhula nokunyusa.
Iimeko zangaphandle zikwabalulekile kutoliko lwamaphupha: ukuhlala phantsi komthi wom-oki kufanekisela iimvakalelo ze ukhuseleko nokhuseleko; Ngeli xesha, ukuba isiphango siyaduma ephupheni, omnye ubhengeza peligro ukubaleka.
Uphawu lwephupha «oki» - ukutolikwa kwengqondo
Njengophawu lwephupha, umthi wom-oki ufumaneka ekutolikeni amaphupha iimpawu ezintle zobuntu njengamandla kunye nempilo eyomeleleyo efunekayo ukuze uphumelele, amandla kunye nefuthe. Ukuphupha kuyaziwa ngokwasentlalweni kwaye uzive umile ngokuqinileyo kubukho bakho.
Kwelinye icala, iphupha lomthi wom-oki linokuchaphazela nawe isiphene bonisa ezo mpawu kwaye ubonakalise isidingo soncedo nokhuseleko. Amandla amandla eyindoda Uphawu lwephupha "oki" lunokubonwa njengokuzibaxa kwaye kunzima.
Ukuba uphawu lwephupha "oki" lubonakala ngokunxibelelene nosapho lwakho, olunika ukhuseleko kunye nokhuseleko, inokuqondwa njengesimemo sokwakho. amandla okungazi othembele kuyo, isiseko sayo samkelwa ebuntwaneni nasebusheni. Mhlawumbi iphupha kufuneka lifumane iingcebiso kubazali okanye kwamanye amalungu osapho amaxesha ngamaxesha.
Abanye babahlalutyi beengqondo babona umthi we-oki kumaphupha amabhinqa njengophawu lwalahlekileyo ukwaneliseka ngokwesondo.
Uphawu lwephupha «oki» - ukutolika kokomoya
Um-oki unjengophawu lwephupha ekuchazeni amaphupha, uphawu lwe esperanza kunye ukungafi: Ivela kwisiqhamo esincinci, i-acorn, kwaye iba ngumthi onamandla onobomi obude. Ukuphupha kufumana amandla okomoya kumanqanaba aphezulu obulumko kunye Ukuqonda Ukufumana.